java ဖြင့် game ရေးသားခြင်း — MYSTERY ZILLION
java ဖြင့် game ရေးသားခြင်း
October 2009 edited February 2011 in Java
ဒိ topic မှာjava ဖြင့် game ရေးသားခြင်း ရေးနည်း သင်ခန်းစာလေးကို အခြေခံကစပြီး သင်ကြ.းပေးကြပါလားခင်ဗျာ။
ဘယ်သူမှ ဒီမှာ ၀င်ရေးနိုင်မယ်မထင် !
ဂိန်းတစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဖို့က အများကြီးလို့ပါတယ်...
ကိုယ်ရေးမဲ့ဂိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သိထားရမှာ အများကြီး...
ဂိန်းပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး လန်းဂွေ့ချ်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ရမယ်...
Flash နဲ့ရေးလည်း Flash script တွေ၊ java ဆိုလည်း multi Thread တွေ Array တွေ စသည်တို့ကို ထုံးလိုမွှေ ရေလိုနှောက်နိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါ...ဒါက programming ပိုင်း
နောက်တစ်ပိုင်းက .... ဂိန်အမျိုးအစား ဘယ်နှစ်ခုရှိသလည်းဆိုတာကိုသိထားရမယ်...
programmer တစ်ယောက်က Game တစ်ခု ဖန်တီးမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ရမှာက ဇတ်လမ်းပိုင်းပါ....ဘယ်လိုဇတ်လမ်းမျိုးလည်း (Action Game တွေမှ ဇတ်လမ်းပါတာဟုတ်ဖူးနော် - Game တိုင်းမှာ ဇတ်လမ်းပါတယ်၊ ဇတ်ညွှန်းပါတယ်၊ ဒါရိုက်တာပါတယ်)
အဲဒီ့ဇတ်လမ်းပေါ်မူတည်ပြီးမှ ဇတ်ကောင်ကို စဉ်းစားရမယ်...နောက်တစ်ခုက ရိုက်ကွင်းပေါ့...ဘယ်လို အခြေအနေမှာ လှုပ်ရှားအသက်၀င်စေမယ်ဆိုတာ
နောက် ကားကူးကားဆက်ပေါ့ဗျာ....ဘယ်အဆင့်အောင်ရင် ဘာဖြစ်မယ်၊ ဘယ်ဆက်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့...အဲဒီ့အပိုင်းတွေကို အရင်ဆုံးစဉ်းစာပြီးမှ Flow လုပ်ထား
အဲဒီ့ မှတ်တမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီး ဒီဇိုင်းပိုင်းကို စဉ်းစားရပါမယ်...
နောက်ဆုံးမှ Language ပိုင်း....ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ language ကို ခုနက မှတ်တမ်းနဲ့ရောပြီး Algorithm ထုတ် Flow chart ဆွဲ
ရိုးရိုးသမာန် DOS ဂိန်းသေးသေးလေတွေကတော့ Google ကနေရှာကြည့်လိုက်ပါ source ပါတွေ့ရပါလိမ့်မယ်....
တစ်ယောက်ထည်း တစ်သီးပုဂ္ဂလ ဖန်တီးချင်သူများကို သာရည်ရွယ်ပါသည်.....
nitikiti က ဒီပို့စ်မှာ ဘယ်သူမှ၀င်ရေးနိုင်မယ်မထင်လို့ပြောထားပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ၀င်ရေးဖို့အထိတော့ အဆင့်မရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေးချင်တဲ့သူများရှိရင် လုပ်နိုင်အောင် ပြောမလိ်ု့ပါ။ Java ဘက်ကဘဲပြောမှာမို့ java သမားတွေအတွက် အသုံး၀င်မယ်ထင်ပါတယ်။ Java နဲ့ game ရေးချင်ရင် Thread ကို နိုင်အောင်လုပ်ပါ။ အဓိက ကတော့ Synchronize ရယ် Wait(), Notify() တို့ကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ C# မှာ Timer သုံးလို့ရပေမယ့် java မှာ thread နိုင်ရင် 頂点ပါဘဲ။ ပြီးတော့ Graphic အတွက် Graphic Api ကိုသေချာသုံးတတ်အောင်လုပ်ပါ။ ဒါမှ 2d game တစ်ခုကို ကောငး်ကောင်းေ၇းလို့ရမှာပါ။ resoultion,refresh rate,preventing flicker စတဲ့ concpets တွေကိုလေ့လာပါ။ ပြီးတော့ အသံအတွက်က sound api ရှိပါတယ်။ I/O အတွက်ကလည်း only pc အတွက်ဆိုရင် key event နဲ့ mouse event ကို ဖမ်းတတ်ရင်ရပါတယ်။ joy stick နဲ့ဆိုရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ third parties api တွေရှိပါတယ်။ jlwgl(java light weighted game library) ကိုလေ့လာနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ ကိုprincekarit(????) ပြောခဲ့သလိုဘဲ story ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ story ပေါ်မူတည်ပြီး လေ့လာရမယ့်အပိုင်းက ကွာသွားမှာမို့ပါ။ ဥပမာ- shooting game လိုဟာမျိုးဆိုရင် ကျည်ဆံရဲ ့လမ်းကြောင်းကိုတွက်ဖို့က vector,polar system အစရှိတဲ့ သချာင်္ဆိုင်ရာ တွေလည်း လေ့လာဖို့လိုပါမယ်။ သာမာန်strategy game ဆိုရင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ algorithm တွေကို လေ့လာမှ ဆက်ရေးလို့ရမှာမို့ပါ။ ဒါကြောင့် java နဲ့ game ရေးချင်သပဆိုရင်တော့ MZ က moderator မောင်ပြုံ းဆိီမှာ Developing Games in Java ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို တောင်းပါ။ သူဆီက အဆင်မပြေရင် ရှာပြီးဒေါင်းပါ။ မရရင် ကျနော်တင်ပေးမယ်။ အဲ့စာအုပ်က coding ထက် logic ပိုင်းကိုရေးထားတာဆိုတော့ game တစ်ခုရေးဖို့အတွက် ကုန်ကြမ်းတွေ အများကြီးရတယ်လေ။ 3d game အတွက်ကတော့ ကျနော်လည်း လိုက်မမှီသေးလို့ မပြောတတ်သေးပါဘူးဗျာ
game မရေးချင်ရင် အောက်က post ကို အရင်ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က java နဲ့ တော့ game မရေးတတ်ပါ။ objective-c နဲ့ပဲ iphone game ရေးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မပြောတတ်ပါ။ theory ပိုင်းလောက်ကိုတော့ ကျွန်တော် ပေးတဲ့ link ထဲမှာ ကိုမြင့်ကျော်သူ ရဲ့ blog တွေကို ဖတ်လိုက်ရင် သိသွားပါမယ်။
java နဲ့ လုပ်ချင်ရင်တော့ ဒီ post လေးကို ဖတ်ကြည့်ဗျ။
အစ်ကို တို့ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
အစ်ကိုတို့ပြောတဲ့ Thread တို့၊Synchronize ရယ် Wait(), Notify() Graphic Api၊resoultion,refresh rate,preventing flicker ၊အဲဒါတွေက ဘာတွေလဲ ခင်ဗျာ
ပြီးတော့ အဲဒါတွေကို ဘယ်လိုလေ့လာလို့ရမလဲ။ပြီးတော့ (http://www.mysteryzillion.org/member.php/6271-JPro.Zack) (http://www.mysteryzillion.org/member.php/6271-JPro.Zack) ကိုJPro.Zack ပြောတဲ့ အကြောင်းတွေကို လည်း အသေးစိတ်သိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
အစ်ကို အားရင် ရှင်းပြပေးပါ။
thread , synchronize တို့ကို မသိသေးရင် java အခြေခံမတတ်သေးဘူးလို့ ဆိုရမယ်... game မလုပ်ရသေးခင် java အခြေခံကို လေ့လာပါ။ game ရေးချင်ရင်တော့ java ထက် C++ ကို လေ့လာသင့်ပါတယ်။
ကျနော် ကို C++ မြန်မာလိုလေ့လာလို့၇မယ့် စာအုပ်လေးများမရျိဘူးလား အစ်ကို
ကျနော်ကတော့ ဟောဒီမှာ http://www.fileserve.com/file/QQkYTV3
တင်ပေးလိုက်ပြီဗျာ။ သူ့ကိုသေချာဖတ်စေချင်တယ်။ သူက coding ပိုင်းကို အသေးစိတ်မပြောပေမယ့် ဘယ်ဟာလုပ်ချင်ရင် ဘယ် api ကိုသုံးရမယ်ဆိုတာ သေချာလမ်းပြပေးတယ်။ ပြီးတော့ jdk 1.4 ကနေစပြီး support လုပ်တာမို့ သိပ်ပြသနာမရှိဘူးဗျ။ အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ဖို့မပျင်းပါနဲ့ဗျာ။ မြန်မာလို ဖတ်ရင် ပိုခက်ပါတယ်။
JPro.Zack wrote: »
ဝင်ထောက်ခံပေးလိုက်ဦးမယ် မူရင်းက အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဗမာလိုဆိုကတည်းက တစ်ဆင့်ဘာသာပြန်ထားတာပါ အဲဒါဆိုရင် ဘာသာပြန်တဲ့လူရဲ့ အဆင့်အတန်းက ဘယ်လောက်ဆိုတာ စကားထပ်ပြောပါတယ် ဒီနေရာမှာ မျက်နှာချင်းဆိုင်သင်တောင် သင်တဲ့လူတတ်တာရဲ့ ၄၀% ရနိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး အဲဒါကိုဗမာလိုရေးထားတော့ ပိုဆိုးသွားမှာပေါ့။
အစ်ကိုပေးထားတဲ့လင့်မှာ ဘယ်နားကနေ download လုပ်ရမှာပါလဲခင်ဗျာ။
ကျနော် တခါမှ အဲဒါ ကြီးကို မသုုံးဘူးလို့ပါခင်ဗျာ။
ဘယ်လို ဒေါင်းရမလဲ ဆိုတာလေး လမ်းညွန့်ပေးပါခင်ဗျာ။
ကျေးဇူး အကြီးကြီး တင်ပါတယ်။
MZ က moderator မောင်ပြုံ းဆိီမှာ Developing Games in Java ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို
ကိုကို မောင်ပြုံး ကျနော် ကို အဲဒီစာ အုပ်လေးပေးပါဗျာ။
sorry ကိုနောင်ရေ ကိုမောင်ပြုံး စစ်မှုထမ်းသွားနေရတာကို ကျနော်မေ့သွားလို့ သူ့ကို တောင်းပါလို့ပြောမိတာ။ အပေါ်က ကျနော်ပေးထားတဲ့ link ကိုသွားလိုက်ရင် ဆိုဒ်ရဲ့လေးပုံသုံးပုံလောက် အောက်ဆုံးနားမှာ premium user နဲ့ free user နဲ့ရွှေးရတာရှိတယ်လေ။ အဲ့မှာ free user အောက်မှာ အစိမ်းရောင်နဲ့ slower download ဆိုတာရှိတယ်
အဲ့ဒါနှိပ်ပြီး human check လုပ်ပြီးရင် ဒေါင်းလို့ရပြီ။ စမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာ။ pdf အနေနဲ့လိုချင်ရင်တော့ ကိုမင်းလွင်ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်ထဲက google လင့်ခ်ကိုသွားပြီး save pdf file လုပ်လိုက်ရင် pdf နဲ့ရလိမ့်မယ်။ စမ်းကြည့်ပေါ့ဗျာ။ ခုလောလောဆယ်တော့ ကျနော်လည်း game ဘက်ကို စောက်ချ လုပ်ဖြစ်နေတယ်။ 2d shooting game ဆိုပါတော့... လောလောဆယ်တော့ firstage ကို တော်တော် လုံးပမ်းနေရတယ်။ sample ကြည့်ချင်ရင်တော့ ကျနော် flash နဲ့ ထုတ်ထားတာရှိတယ်။ အဲ့ကောင်ကတော့ animation သက်သက်ဘဲ၊ concept ယူရုံလုပ်ထားတာဆိုတော့လေ။ user full control ကတော့ java နဲ့ရေးနေတယ်။ ဘာမှ မခက်ပါဘူး။ java.awt နဲ့ javax.swing ထဲမှာ လိုအပ်တာအကုန်ရှိတယ်။ [IMG]file:///C:/Users/JOHNBA%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png[/IMG]မရှိတာလေးတွေကတော့ ကိုယ်ဘာကိုယ်ဖြည့်ရေး နဲ့ lwjgl တို့လို third parties တွေဆီကယူနဲ့။ အဓိက ကတော့ အချိန်ပေးနိုင်ဖို့ရယ် စာဖတ်နိုင်ဖို့ရယ်ပါဘဲ။ ကဲ sample ကြည့်ချင်ရင်တော့ ဟောဒီမှာဗျာ သူလည်း ဒေါင်းနည်းက အပေါ်က နဲ့တူတူပါဘဲ။...